ပိုစတာဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Flyer Banner ဖုံး Thumbnail ဒီဇိုင်နာ |
ပင်မစာမျက်နှာ » ဓါတ်ပုံပညာ Apps ကပ » ပိုစတာဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Flyer Banner ဖုံး Thumbnail ဒီဇိုင်နာ
ပိုစတာဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Flyer Banner ဖုံး Thumbnail ဒီဇိုင်နာ APK ကို
ပရိုမိုးရှင်းပိုစတာများ, ကြော်ငြာ, ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြေညာချက်များ Create, ထိုအပေါ်အဖုံးဓါတ်ပုံအံ့သြဖွယ်နောက်ခံ, texture, အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ဖောင့်, စတစ်ကာနှင့်အတူ သွား. သင်တို့ကိုဖန်ဆင်းသော want.Poster အာရုံ get အတွင်းဖန်တီးမှုပိုစတာသို့သင့်ရဲ့ပုံမှန်ပို့စ်များကိုအသွင်ပြောင်းမည်ကိုတစ်ဦးအပိုဆောင်း-သာမန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် စက္ကန့်။ ဒီ app ကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုပိုစတာတစ်ခုအချည်းနှီးသောနောက်ခံအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုအထိရောက်ဆုံး tools တွေရတယ်ထားပါတယ်, ဒါကြောင့်အားဖြင့်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းပိုစတာတစ်ခု All-In ကွဲပြားခြားနားသော ratios.share အတွက် 120 + နောက်ခံရွေးချယ်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးရာတစျခု App ဖြစ်ပါတယ် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလွယ်ကူသောခွဲဝေမှု options တွေကိုလူတိုင်းကသင့်ဖန်တီးမှုကိုသိကြကုန်အံ့။
ပိုစတာကိုဖန်ဆင်းသောလူအပေါင်းတို့သည်သင်၏ Poser, နဖူးစည်းစာတန်းနှင့်ဖန်တီးမှုအနုပညာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကိုဖုံးလွှမ်းသောပြည့်စုံဓာတ်ပုံ Editor ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအပိုစတာဒီဇိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်
အားလုံးသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်ဖန်တီးမှုများဒီဇိုင်းတစ်ခုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အခမဲ့ Now ကို Download လုပ်ပါ !!
ပိုစတာဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Flyer Banner ဖုံး Thumbnail ဒီဇိုင်နာ
28.45 ကို MB
မိုဘိုင်း apps များ Photoshop